एउटा मोबाइल चार्ज गरेको ६० रुपैयाँ !
एउटा मोबाइल चार्ज गरेको ६० रुपैयाँ !	By नवीन सन्देश on	४ भाद्र २०७३, शनिबार १०:१७
काठमाडौँ । बागलुङको पश्चिममा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा करिब एक महिनादेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइने नछोएको लघुजलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ता असार १० गते आएको बाढीपहिरोले २० वता लघुजलविद्युतमा क्षति पुर्‍याएपछि अन्धारमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
बूतिवाङ क्षेत्रका अधिकारीचौर, ओबाङ, खंगा, बाहोरागाउँ र निसीलगायतका गाविसमा सञ्चालित आयोजनामा इाति पुगेपछि करिब ५ हजार उपभोक्त मटि्टतेल बाल्न बाध्य भएका छन् । विद्युत आयोजना मर्मतमा अझै दूई तीन हप्ता लाग्ने भएपछि बुर्तिबाङ बजारमा जेनेरेटरको मात्र खपत बढेको छ ।
स्थानीय बव्यापारीले जेनेरटर खरिद गरी आफ्नेा उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेका छन् । विद्युत नभएपछि स्थानीयलाई मोबाइल चार्ज गर्न समेत मुस्किल परेको छ । उनीहरु बुर्तिङ बजार आएर जेनेरेटरबाट मोबाइल चार्ज गर्ने गरेका छन् ।
एउटा मोबाइल चार्जबापत पसलेले ५० देखि ६० रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन् । विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि स्थानीयमा रिचार्जभन्दा मोबाइल चार्ज गर्न बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राजधानी दैनिक